XOG: Xildhibaanadii taageersanaa Guddoomiye Jawaari oo ku biiray ololaha doorashada Guddoomiyaha cusub – Kismaayo24 News Agency
XOG: Xildhibaanadii taageersanaa Guddoomiye Jawaari oo ku biiray ololaha doorashada Guddoomiyaha cusub
by admin 10th April 2018 05
Iyadoo uu soo dhammaaday khilaafkii ka dhashay mooshinkii Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa waxaa durba soo bilowday ololaha doorashada Guddoomiyaha cusub.
Taageerayashii la safnaa Guddoomiye Jawaari ee la baxay Badbaadada Baarlamaanka ayaa dhinacooda ka galay ololaha, waxaan ka dhex muuqda xubno u dhowaa Guddoomiye Jawaari oo isu sharxay xilka guddoomiyaha Baarlamaanka.
Xildhibannadan oo si weyn u taageeray guddoomiye Jawaari, kuna mideysnaa inuusan is casilin ayaa hadda u muuqda inaysan ku guuleysan inay isbaheysi ahaan u sii jiraan, waxaana xubnaha isu sharxay xilka guddoomiyaha ka mida Xildhibaan C/fataax Geesey.
Guddoomiye Jawaari ayaa la filaya inu Arbacadda Berri si rasmi ah ugu dhawaaqo is-casilaadiisa isagoo khudbad ka jeedin doona fadhiga Baarlamaanka la isugu yeeray oo gar u ah is-casilaadda Guddoomiye Jawaari.
DHAGEYSO:- Xildhibaan Fiqi, oo ka digay in hantida Qaranka aan loo adeegsan doorashada Gudoomiyaha
Booqashadii John Kerry Muxuu Ka yiri Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo+Dhageyso
Shirka u dhaxeeya Madaxda dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maanta galaya waqti dheeri ah